USAGM အကြီးအကဲသစ် Michael Pack
အမေရိကန် ကမ္ဘာ့သတင်းမီဒီယာ ဌာန U.S. Agency for Global Media (USAGM) ရဲ့ အကြီးအကဲ အသစ်ဖြစ်လာတဲ့ Michael Pack က ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းသတင်းမီဒီယာကွန်ရက်၊ လွတ်လပ်တဲ့ အာရှအသံ (RFA) နဲ့ လွတ်လပ်တဲ့ ဥရောပအသံ (RFE/Free Liberty)၊ ကျူးဘားအသံလွှင့်ဌာနဆိုင်ရာရုံးနဲ Open Technology Fund ဌာနတွေရဲ့ အကြီးအကဲတွေကို ရာထူးကနေ ထုတ်ပယ်လိုက်တာ နဲ့ပတ်သက်ပြီး စိုးရိမ်မှုရှိကြောင်း အမေရိကန် ပါတီကြီး ၂ ရပ်စလုံးက လွှတ်တော်အမတ်တွေက ပြောကြပါတယ်။
ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီဝင်တွေ ဖြစ်တဲ့ အောက်လွှတ်တော် ရသုံးမှန်းခြေငွေစာရင်းဆိုင်ရာ ကော်မတီဥက္ကဌ Nita Lowey နဲ့ အောက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီဥက္ကဌ Eliot L. Engel တို့က Mr. Pack ဟာ သူအလုပ်စဝင်တဲ့ ပထမသီတင်းပတ်ထဲမှာပဲ အခုလို ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူခဲ့တာ အတွက် အံ့သြရကြောင်းနဲ့ ဒီမိုကရေစီနဲ့ လွတ်လပ်မှုအတွက် ဒေါက်တိုင်တခု ဖြစ်တဲ့ သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကို ကာကွယ်ပြီး မြှင့်တင်ပေးဖို့ထက် သမ္မတထရမ့်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ နိုင်ငံရေးဆန္ဒကို ဦးစားပေးဖို့ ဦးတည်ပြီး ဒီဌာနကို ဦးဆောင်မှာကို အထူးစိုးရိမ်ကြောင်း ပူးတွဲကြေညာချက် ထုတ်ပြန် ပြောဆိုပါတယ်။
အောက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီ က ရီပတ်ဘလစ်ကင်ခေါင်းဆောင် Michael McCaul နဲ့ ရီပတ်ဘလစ်ကင် အထက်လွှတ်တော်အမတ် Marsha Blackburn တို့ကလည်း Open Technology Fund ဌာနအကြီးအကဲ Laura Cunningham ကို အလုပ်ဖြုတ်ပစ်တာအတွက် စိတ်အနှောက်အယှက် ဖြစ်ရကြောင်း ပူးတွဲကြေညာချက် ထုတ်ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဌာနဟာ အာဏာရှင်လက်အောက်မှာ ဖြစ်စေ စိုးရိမ်ရတဲ့ အခြေနေရှိတဲ့ ဟောင်ကောင်လို ဒေသမှာ ဖြစ်စေ နေထိုင်သူတွေအတွက် စိုးရိမ်မှုကင်းကင်းနဲ့ အဆက်အသွယ်လုပ်နိုင်အောင်နဲ့ အင်တာနက်သုံးနိုင်အောင် လုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ ဌာန ဖြစ်ကြောင်း ပြောပါတယ်။
VOA သတင်းဌာန ဒါရိုက်တာ Amanda Bennett နဲ့ ဒုတိယဒါရိုက်တာ Sandy Sugawara တို့ကတော့ တနင်္လာနေ့ ကတည်းက နုတ်ထွက်သွားခဲ့ကြတာပါ။
အထက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားရေးကော်မတီ က ထိပ်တန်းဒီမိုကရက် အမတ် Bob Menendez ကလည်း အခုလို သတင်းဌာန အကြီးအကဲတွေကို အလုပ်ဖြုတ်ပစ်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဝေဖန်လိုက်သလို ဒါဟာ USAGM သတင်းဌာနရဲ့ လွတ်လပ်ခွင့်ကို အားနည်းစေတဲ့ လုပ်ရပ်လို့ သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
USAGM အကြီးအကဲ အသစ်ကတော့ ဒီသတင်းဌာနတွေက အကြီးအကဲတွေကို ဘာကြောင့် အခုလို အလုပ်ထုတ်ပစ်တယ် ဆိုတာကို ထုတ်မပြောခဲ့ပါဘူး။
USAGM အကွီးအကဲသဈလုပျဆောငျခကျြအပျေါ ပါတီကွီးနှဈရပျ စိုးရိမျ
အမရေိကနျ ကမ်ဘာ့သတငျးမီဒီယာ ဌာန U.S. Agency for Global Media (USAGM) ရဲ့ အကွီးအကဲ အသဈဖွဈလာတဲ့ Michael Pack က ဗုဒ်ဓဟူးနမှေ့ာ အရှအေ့လယျပိုငျးသတငျးမီဒီယာကှနျရကျ၊ လှတျလပျတဲ့ အာရှအသံ (RFA) နဲ့ လှတျလပျတဲ့ ဥရောပအသံ (RFE/Free Liberty)၊ ကြူးဘားအသံလှငျ့ဌာနဆိုငျရာရုံးနဲ Open Technology Fund ဌာနတှရေဲ့ အကွီးအကဲတှကေို ရာထူးကနေ ထုတျပယျလိုကျတာ နဲ့ပတျသကျပွီး စိုးရိမျမှုရှိကွောငျး အမရေိကနျ ပါတီကွီး ၂ ရပျစလုံးက လှတျတျောအမတျတှကေ ပွောကွပါတယျ။
ဒီမိုကရကျတဈပါတီ ဝငျတှေ ဖွဈတဲ့ အောကျလှတျတျော ရသုံးမှနျးခွငှေစောရငျးဆိုငျရာ ကျောမတီဥက်ကဌ Nita Lowey နဲ့ အောကျလှတျတျော နိုငျငံခွားရေးကျောမတီဥက်ကဌ Eliot L. Engel တို့က Mr. Pack ဟာ သူအလုပျစဝငျတဲ့ ပထမသီတငျးပတျထဲမှာပဲ အခုလို ပွငျးပွငျးထနျထနျ အရေးယူခဲ့တာ အတှကျ အံ့သွရကွောငျးနဲ့ ဒီမိုကရစေီနဲ့ လှတျလပျမှုအတှကျ ဒေါကျတိုငျတခု ဖွဈတဲ့ သတငျးလှတျလပျခှငျ့ကို ကာကှယျပွီး မွှငျ့တငျပေးဖို့ထကျ သမ်မတထရမျ့အစိုးရအဖှဲ့ရဲ့ နိုငျငံရေးဆန်ဒကို ဦးစားပေးဖို့ ဦးတညျပွီး ဒီဌာနကို ဦးဆောငျမှာကို အထူးစိုးရိမျကွောငျး ပူးတှဲကွညောခကျြ ထုတျပွနျ ပွောဆိုပါတယျ။
အောကျလှတျတျော နိုငျငံခွားရေးကျောမတီ က ရီပတျဘလဈကငျခေါငျးဆောငျ Michael McCaul နဲ့ ရီပတျဘလဈကငျ အထကျလှတျတျောအမတျ Marsha Blackburn တို့ကလညျး Open Technology Fund ဌာနအကွီးအကဲ Laura Cunningham ကို အလုပျဖွုတျပဈတာအတှကျ စိတျအနှောကျအယှကျ ဖွဈရကွောငျး ပူးတှဲကွညောခကျြ ထုတျပွနျပွောဆိုခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီဌာနဟာ အာဏာရှငျလကျအောကျမှာ ဖွဈစေ စိုးရိမျရတဲ့ အခွနေရှေိတဲ့ ဟောငျကောငျလို ဒသေမှာ ဖွဈစေ နထေိုငျသူတှအေတှကျ စိုးရိမျမှုကငျးကငျးနဲ့ အဆကျအသှယျလုပျနိုငျအောငျနဲ့ အငျတာနကျသုံးနိုငျအောငျ လုပျဆောငျပေးနတေဲ့ ဌာန ဖွဈကွောငျး ပွောပါတယျ။
VOA သတငျးဌာန ဒါရိုကျတာ Amanda Bennett နဲ့ ဒုတိယဒါရိုကျတာ Sandy Sugawara တို့ကတော့ တနင်ျလာနေ့ ကတညျးက နုတျထှကျသှားခဲ့ကွတာပါ။
အထကျလှတျတျော နိုငျငံခွားရေးကျောမတီ က ထိပျတနျးဒီမိုကရကျ အမတျ Bob Menendez ကလညျး အခုလို သတငျးဌာန အကွီးအကဲတှကေို အလုပျဖွုတျပဈတာနဲ့ပတျသကျပွီး ဝဖေနျလိုကျသလို ဒါဟာ USAGM သတငျးဌာနရဲ့ လှတျလပျခှငျ့ကို အားနညျးစတေဲ့ လုပျရပျလို့ သတိပေးလိုကျပါတယျ။
USAGM အကွီးအကဲ အသဈကတော့ ဒီသတငျးဌာနတှကေ အကွီးအကဲတှကေို ဘာကွောငျ့ အခုလို အလုပျထုတျပဈတယျ ဆိုတာကို ထုတျမပွောခဲ့ပါဘူး။
ဗွီအိုအေ ၀န်ထမ်းတဦး ပထမဆုံး COVID-19 ကူးစက်ခံရ
ရိုဟင်ဂျာဘာသာ အစီအစဉ် ဗွီအိုအေ စတင် ထုတ်လွှင့်